VOAVAHA: TSY AFAKA MIFANDRAY AMIN'NY MPANONTA NY WINDOWS, NOLAVINA NY FIDIRANA 2022 - MALEFAKA
Voavaha: Tsy afaka mifandray amin'ny mpanonta ny Windows, nolavina ny fidirana 2022
Nohavaozina farany 17 Apr 2022 0
Atsaharo ny asa fanontana printy aorian'ny fanavaozana windows 10 1809? Na rehefa mifandray amin'ny mpanonta ifampizarana tambajotra dia mampiseho hafatra diso Tsy afaka mifandray amin'ny mpanonta ny Windows, lavina ny fidirana Ny antony mahazatra indrindra amin'ity hadisoana ity dia tsy afaka mifandray amin'ny mpanonta ny windows dia ny serivisy mpanonta printy dia Stucked, manana antontan-taratasy miandry ao amin'ny filaharana mihidy, Ny kaontinao mpampiasa dia tsy manana zo hifandray amin'ny mpanonta. Na ny kolikoly sy ny fametrahana tsy araka ny tokony ho izy ny valin'ny mpamily printy
Tsy afaka mifandray amin'ny mpanonta ny Windows - Tsy nahomby ny fandidiana tamin'ny Error 0x0000007e
Windows tsy afaka mifandray amin'ny mpanonta - Tsy nahomby ny fandidiana tamin'ny Error 0x00000002
Tsy vita ny fandidiana (error 0x0000007e)
Tsy afaka mifandray amin'ny mpanonta 0x00000bcb ny Windows
Tsy afaka mifandray amin'ny mpanonta 0x00003e3 ny Windows
Windows tsy afaka mifandray amin'ny mpanonta tsy misy mpanonta hita
Raha toa ka sahirana amin'ity olana ity ianao, tsy afaka mifandray amin'ny mpanonta, ity ny fomba manala ity hadisoana ity ary mametraka ny mpanonta tsy misy olana.
Tsy afaka mifandray amin'ny mpanonta ny Windows
Voalohany indrindra, ampifandraiso amin'ny solosaina ny mpanonta printy anao ary ampidiro ON.
Raha amin'ny mpanonta Wireless, Ampidiro izany ary ampifandraiso amin'ny tambajotra Wifi.
Indraindray ny fampandehanana herinaratra dia afaka mamaha ilay olana. Vonoy ny mpanonta anao ary esory izany, andraso 30 segondra, ampidiro indray ny mpanonta, ary velomy indray ny mpanonta.
Ary koa, soso-kevitra ny hanamarina raha manana alalana hanonta sy hitantana ny mpanonta ny kaonty mpampiasa. Mba hanaovana izany dia mandehana any amin'ny PC izay ametrahana ny mpanonta eo an-toerana ary
Sokafy ny tontonana fanaraha-maso.
Eo ambanin'ny Hardware sy Sound, tsindrio ny Devices and Printers.
Tadiavo ny mpanonta anao ary tsindrio havanana.
Tsindrio ny Properties Printer avy amin'ny menio ary safidio ny tabilao Security.
Safidio ny anaran'ny kaonty mpampiasa anao amin'ny lisitry ny kaonty mpampiasa.
Ataovy azo antoka fa voamarika ho Allow avokoa ny boaty faneken'ny fahazoan-dàlana.
Raha toa ka efa napetraka araka ny fahazoan-dàlana ny fahazoan-dàlana, dia mety ho olana amin'ny fametrahana tambajotra izany. Jereo raha voarindra tsara amin'ny tambajotra ny kaontinao ary jereo ny safidin'ny tambajotra.
Raha mbola mitohy ny olana dia mandehana ny mpanonta olana ary jereo raha manampy izany.
Soraty eo amin'ny fikarohana menu fanombohana ny famaha olana ary tsindrio ny Enter.
tsindrio ny Printer ary safidio ny Run the troubleshooter
izany dia hanamarina sy hamaha ny olana manakana ny asa fanontana feno.
Avereno indray ny serivisy Print Spooler
Tsindrio Windows Key + R dia soraty services.msc ary tsindrio ny Enter.
Tadiavo ny serivisy Print Spooler ao amin'ny lisitra ary tsindrio indroa eo.
Ataovy azo antoka fa ny karazana Startup dia napetraka ho Automatic ary mandeha ny serivisy, avy eo tsindrio ny Stop ary tsindrio indray ny fanombohana mba hanombohana indray ny serivisy.
Mifindra amin'ny tabilao dependencies ary jereo ny serivisy miankina amin'ny lisitra mandeha.
Tsindrio Ampiharo arahin'ny OK.
Aorian'izay, andramo indray ny manampy ny mpanonta ary jereo raha azonao atao ny manamboatra ny Windows tsy afaka mifandray amin'ny olan'ny Printer.
Adikao ny mscms.dll
Mandehana any amin'ny lahatahiry manaraka: C:Windowssystem32
Tadiavo ny mscms.dll ao amin'ny lahatahiry etsy ambony ary tsindrio havanana ary mifidiana kopia.
Apetaho amin'ity toerana manaraka ity ny rakitra etsy ambony araka ny rafitra PC-nao:
C:windowssystem32spooldriversx643 (Ho an'ny 64-bit)
C:windowssystem32spooldriversw32x863 (Ho an'ny 32-bit)
Avereno indray ny PC-nao mba hitahiry fiovana ary andramo indray ny mifandray amin'ny mpanonta lavitra.
Ity dia tokony hanampy anao hamaha ny Windows tsy afaka mifandray amin'ny olan'ny mpanonta, raha tsy izany dia tohizo.
Fafao ny mpamily mpanonta tsy mifanaraka
Indraindray Ny olana dia mety hitranga noho ny mpamily mpanonta tsy mifanaraka. Ary koa, Ny fametrahana ny mpanonta teo aloha dia afaka manakana ny mpanonta printy tsy hampiditra mpanonta vaovao. Noho izany dia azonao atao ny manandrana manala ireo mpamily efa lany andro ireo ary mametraka azy ireo indray.
Tsindrio Win + R dia soraty printmanagement.msc ary tsindrio ny Enter
Hanokatra fitantanana fanontana izany.
Avy amin'ny tontonana havia, tsindrio Mpamily rehetra
Amin'izao fotoana izao eo amin'ny varavarankely havanana, tsindrio havanana amin'ny mpamily mpanonta ary tsindrio Delete.
Raha mahita anaran'ny mpamily mpanonta mihoatra ny iray ianao dia avereno ireo dingana etsy ambony.
Avereno indray ny windows ary Andramo indray ny manampy ny mpanonta ary mametraka ny mpamily azy.
Mamorona seranan-tsambo vaovao eo an-toerana
Sokafy ny Control Panel.
Jereo amin'ny kisary lehibe, tsindrio ny Devices and Printers.
Tsindrio Add a printer eo an-tampon'ny varavarankely.
Safidio ny Add Network, Wireless na Bluetooth Printer
Mifidiana Mamorona seranan-tsambo vaovao, ovay ny karazana seranan-tsambo amin'ny seranan-tsambo eo an-toerana ary tsindrio ny bokotra Manaraka.
Ampidiro anarana seranan-tsambo ao anaty boaty. Ny anaran'ny seranan-tsambo dia ny adiresin'ny mpanonta.
Ny endrika adiresy dia ny \_ adiresy IP na ny Anaran'ny SolosainaAnaran'ny mpanonta (jereo ity efijery manaraka ity). Avy eo tsindrio ny bokotra OK.
Safidio ny modely mpanonta ao amin'ny lahatahiry ary tsindrio ny bokotra Next.
Araho ny toromarika sisa eo amin'ny efijery hamita ny fampidirana ny mpanonta.
Tsindrio Win + R dia soraty regedit ary tsindrio ny bokotra enter,
Hanokatra ny Windows Registry Editor izany.
nomaniny ho solon'izay Windows rejisitra avy eo Ao amin'ny pane havia , hitety mankany amin'ity fanalahidy manaraka ity
Tsindrio havanana amin'ny Mpanome pirinty amin'ny lafiny mpanjifa ary mifidiana Fafao.
Avereno indray ny PC sy ny mpanonta, jereo izao fa tsy misy hadisoana intsony rehefa mifandray amin'ny mpanonta ifampizarana eo an-toerana.
Nanampy tamin'ny fanamboarana ve ireo vahaolana ireo Tsy afaka mifandray amin'ny mpanonta ny Windows ? Ampahafantaro anay amin'ny fanehoan-kevitra eto ambany, vakio koa:
Mpanonta ao amin'ny Fanjakana Error? Ity ny fomba hamahana ny olana amin'ny mpanonta amin'ny windows 10.
Tsy mandeha ny iTunes Windows 10? Eto 5 samy hafa iTunes olana sy ny vahaolana.
Amboary ny iPhone tsy miseho amin'ny iTunes ho an'ny Windows 10, 8.1 ary 7
Voavaha: Windows 10 Settings tsy misokatra miasa 2019.
7 vahaolana hamahana ny Windows 10 Tsy afaka mifandray amin'ity tambajotra ity (WiFi).